जिमखाना धाउने कि साइक्लिङ गर्ने ? – Korea Pati
July 5, 2020 July 5, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on जिमखाना धाउने कि साइक्लिङ गर्ने ?
कोरोनाले सर्वत्र सन्त्रास र संकट मच्याइरहेकै बेला सरकारले ८२ लाख रुपैयाँ खर्चेर मन्त्री निवासमा जिमखाना बनाउने तयारी ग¥यो ।
नेता÷मन्त्रीहरुलाई व्यायाम गर्नका लागि भन्दै जिमखाना बनाउने चर्चा भएपछि सर्वसाधरणले अर्को उपाय सुझाए, ‘जिमखाना खोल्नुभन्दा साइकल चढ्ने गर्नु । व्यायाम पनि हुन्छ, राज्यको खर्च पनि कटौती हुन्छ ।’